Romana 6 - Ny Baiboly
Romana toko 6
Maty ny amin'ny fahotana izay natao batemy ho amin'ny Kristy - Tsy maintsy ho masina izay ambanin'ny fahasoavana.
1Inona àry no holazaintsika: mbola hitoetra amin'ny fahotana ihany va isika, hitomboan'ny fahasoavana? 2Sanatria izany! Hataontsika efa maty ny amin'ny fahotana ahoana no mbola ho velona aminy ihany? 3Moa tsy fantatrareo va fa isika rehetra natao batemy ho amin'ny Kristy Jesoa, dia natao batemy ho amin'ny fahafatesany? 4Koa niara-nalevina taminy tamin'ny batemy ho amin'ny fahafatesana isika, mba ho tahaka ny nananganana an'ny Kristy tamin'ny maty, tamin'ny voninahitry ny Ray, no handehanantsika amin'ny fiainam-baovao koa. 5Fa raha nampiraisina taminy tamin'ny fakan-tahaka ny nahafatesany isika, dia ho tahaka izany koa amin'ny fitsanganany; 6fa fantatsika fa ilay olona tranainy toetrantsika dia niara-nofantsihana taminy, mba ho levona ny tenan'ny fahotana, ka tsy hanompo ny fahotana intsony isika, 7satria izay maty dia afaka amin'ny fahotana. 8Ary raha niara-maty tamin'ny Kristy isika, dia mino fa hiara-belona aminy koa; 9sady fantatsika fa rahefa nitsangana tamin'ny maty izy dia tsy maty intsony, tsy manan-kery aminy intsony ny fahafatesana. 10Satria ny fahafatesany moa, dia fahafatesana indray maka ny amin'ny fahotana; fa ny fahavelomany kosa, dia fahavelomana ho an'Andriamanitra. 11Ary aoka ho toy izany koa hianareo no hanao ny tenanareo ho toy ny efa maty ny amin'ny fahotana, fa velona kosa ho an'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesoa.
12Koa aoka ny fahotana tsy hanjaka amin'ny tenanareo mety maty amin'ny fanarahana ny filan-dratsiny; 13ary aoka ny rantsam-batanareo tsy hatolotrareo ho an'ny fahotana nataony fiasana fanaovan-dratsy; fa atolory an'Andriamanitra ny tenanareo, izay maty no velona indray, sy ny rantsam-batanareo hataony fiasana fanaovam-pahamarinana. 14Fa tsy hanan-kery aminareo ny fahotana, satria hianareo tsy ambanin'ny Lalàna, fa ambanin'ny fahasoavana.
15Ahoana àry: hanota va isika, satria tsy ao ambanin'ny Lalàna, fa ao ambanin'ny fahasoavana? Sanatria izany! 16Tsy fantatrareo va fa na iza na iza anoloranareo tena ho mpanompo mba hanaiky azy, dia mpanompon'izay ekenareo hianareo, na ny fahotana ho amin'ny fahafatesana izany, na ny fanekena ho amin'ny fahamarinana? 17Ary isaorana Andriamanitra, fa na dia nanompo ny fahotana aza anie hianareo, dia nanaiky tao am-po tokoa ny fitsipi-pampianarana natolotra anareo; 18ary rahefa afaka tamin'ny fahotana hianareo, dia tonga mpanompon'ny fahamarinana. 19Miteny araka ny fanaon'ny olona aho, noho ny fahalemen'ny nofonareo: tahaka ny nanoloranareo ny tenanareo hanompo ny fahalotoana sy ny tsy fahamarinana hahatanteraka ny tsy fahamarinana, no aoka hanoloranareo ny rantsam-batanareo ankehitriny hanompo ny fahamarinana hahatanteraka ny fahamasinana. 20Fa fony mpanompon'ny ota hianareo, dia olon-ko azy tamin'ny fahamarinana. 21Inona àry no vokatra azonareo tamin'izay? Vokatra mahamenatra anareo fe ankehitriny, fa fahafatesana no iafarany. 22Ary ankehitriny kosa, rahefa afaka tamin'ny fahotana hianareo, ka efa tonga mpanompon'Andriamanitra, dia ny fahamasinana no vokatra azonareo, ary ny fiainana mandrakizay no hiafaranareo. 23Fa ny fahafatesana no tambin'ny ota, ary ny fiainana mandrakizay ao amin'ny Kristy Jesoa Tompontsika kosa no fanomezan'Andriamanitra. >